फेरि आगो ओकल्न थाले ओली ! – ramechhapkhabar.com
कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बलियो पक्ष हो- जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि आफूलाई आत्मविश्वासी देखाउनु र विपक्षीप्रति कठोर अभिव्यक्ति दिनु ।
२०७४ को आम निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग वाम गठबन्धन र २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता गर्दै नेकपा नेतृत्वमा पुगेपछि ओलीको अभिव्यक्तिले यू-टर्न लियो । आफैं पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले नेकपाका अरु नेताहरुप्रति ओलीले कटाक्षको जरुरी भएन ।
पार्टी वैधानिकताको प्रश्नमा पनि प्रचण्ड र माधवलाई कटाक्ष गर्दै ओलीले पेडा पसलेको संज्ञा दिएका थिए । ‘निर्वाचन आयोगबाट हिजो मैले पत्र प्राप्त गरेँ । उहाँहरुले निवेदन हाल्नुभएको रहेछ असली हामी हौं भनेर’ उनले भने, यो बरमझियाको पेडा पसल हो ? असली र नक्कली हुन ।’